जुम्लमा जबर्जस्ती डा. केसी उठाउँनदेखि पत्रकारमाथि प्रहरीकाे हातपात -
जुम्लमा जबर्जस्ती डा. केसी उठाउँनदेखि पत्रकारमाथि प्रहरीकाे हातपात
४ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०८:०१ 370 पटक हेरिएको
जुम्ला /सुर्खेत । डा. गोविन्द केसीको अनशनबारे कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही दिन अघि भनेका थिए– यो संघीय सरकारको मामिला हो । तर, बिहीबार बिहान तिनै मुख्यमन्त्रीलाई संघीय सरकारले जुम्ला पठायो । समन्वयकर्ताका रूपमा भनिए पनि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा आएका मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीलाई स्पष्ट निर्देशन थियो– केसीलाई जसरी पनि जुम्लाबाट उठाएर काठमाडौं पुर्‍याउनू ।
जुम्लामा आमरण अनशनरत डा। गोविन्द केसीलाई सुरक्षाकर्मी लगाएर जबर्जस्ती राजधानी ल्याइएपछि बिहीबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइँदै । जुम्लामै वार्ता गर्नुपर्ने अडानमा रहेका केसीलाई सरकारले बल प्रयोग गरी सेनाको हेलिकप्टरबाट ल्याएको हो । तस्बिर स् इलिट जोशी
यही निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा बिहीबार दिनभर जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रणमैदानमा परिणत भयो । डा। केसीको काठमाडौं नजाने अडान र उनका समर्थकको कुनै पनि हालतमा लैजान नदिने योजनामाथि सरकारले धावा बोल्यो । प्रहरीका साथै स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी र स्थानीय घाइते भए । अन्ततस् दिउँसो ४ बजे सरकारी टोलीले डा। केसीलाई सैनिक हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौं पठायो ।
मुख्यमन्त्री शाहीका साथै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसहितको टोली बिहान करिब ९स्३० बजे जुम्ला पुगेको थियो । केसीलाई काठमाडौं लैजाने योजनाअनुरूप प्रतिष्ठान पुगेका उनीहरूलाई विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीयले अस्पतालभित्र प्रवेश गर्न दिएनन् । अवरोध छिचोल्न नसकी उनीहरू फर्किए । उनीहरू फर्किएको केहीबेरमै प्रहरी बलपूर्वक अस्पताल पस्यो ।
झडपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठोर घाइते भए । अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सक डा। सन्दीप श्रेष्ठ, डा। सूर्यमान लिम्बू, डा। सिद्धार्थ थामीलगायत घाइते भएका छन् । बिरामीका कुरुवा, कर्मचारी, एचए र स्टाफ नर्स विद्यार्थीका साथै केही स्थानीयसमेत घाइते भएका छन् । प्रहरी बालबालिका वार्डमै प्रवेश गरेपछि बिरामी बच्चालाई अन्यत्र सारिएको थियो ।
जुम्लाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी डा। तपनकुमार दाहालले अस्पतालमा भेला भएको भीड तितरबितर गर्न बल प्रयोग गरिएको बताए । ‘सरकारी टोलीले डा। केसीलाई भेट्नै पाएन, यस्तो अवस्थामा भीड हटाउनुको विकल्प रहेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले सामान्य बल प्रयोग गर्नुपरेको हो ।’ बिहीबार दिनभर भएको झडपमा अस्पतालका फर्निचर, बेड र उपकरणमा क्षति पुगेको अस्पतालले जनाएको छ ।
डा।केसीलाई अनशन स्थलबाट बाहिर ल्याउन अस्पतालभित्र प्रवेश गरेको प्रहरीले जुम्लाका कान्तिपुरकर्मी एलपी देवकोटासहितका पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार गरेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ९शिक्षण अस्पताल० मा प्रहरीले चिकित्सक र विद्यार्थीमाथि लाठीचार्ज गरिरहेको फोटो खिच्ने क्रममा प्रहरीले देवकोटाको क्यामरासमेत खोसेको थियो ।
डा। केसीले राज्य आतंककारीको शैलीमा उत्रेको र नरसंहार हुने सम्भावना बढेपछि आफू काठमाडौं जान तयार भएको बताएका छन् । ‘म यही पवित्र भूमिमा देहत्याग गर्न पनि तयार थिएँ,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘तर राज्यले जनतामाथि दमन गर्दै अपहरणको शैलीमा मलाई काठमाडौं लैजान खोज्यो ।’ प्रहरीले अधिक बल प्रयोग गर्दा जुम्ली जनतालाई क्षति हुने भएपछि काठमाडौं जाने परिस्थितिसँग सम्झौता गरेको उनले बताए । सरकारको ‘गुन्डागर्दी’ शैलीले अस्पतालमा धेरै क्षति भएको डा। केसीले बताए ।
‘यसले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार हरण गरेको छ । अस्पतालभित्रै गोली चल्नुभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ रु’ प्रहरीले एम्बुलेन्समा राखेर हेलिप्याडतिर लैजानुअघि उनले भने, ‘राज्यले गरेको यो क्षतिको जिम्मा कसले लिने ?’ कान्तिपुर दैनिकबाट